Wararka - Amazons Dammaanadda Tayada Qalabka
Caymiska 3 Sano
Adeegyada Kadib-Iibinta & Dammaanadda Lacag celinta
Fadlan ogow: dammaanad qaadku ma daboolayo waxyeelo jireed oo ula kac ah, qoyaan daran, ama waxyeelo ula kac ah.
* Intaa waxaa dheer, waxaan sidoo kale dammaanad ka qaadeynaa dhammaan badeecadeenna inay shaqeynayaan markii aad hesho mooyee haddii kale si kale looma sheegin. Qanacsanaantaadu waa noo muhiim, markaa haddii alaabtaadu tahay DOA (Dhimashada Imaatinka), nala soo socodsii, oo nagu soo celi 30 maalmood gudahood laga bilaabo taariikhda wax iibsiga. Waxaan kuu soo diri doonaa badel isla marka aan helno sheygaaga aad soo celisay (Kharashyada laxirira soo celinta alaabada dib looma celin doono. Waxaan bixin doonaa kharashka ku baxay soo dirida bedelka).
* Dammaanad qaadku wuu madhnaan doonaa haddii badeecooyinka si qaldan loo isticmaalo, loo maareeyo, ama wax looga beddelo si uun.
* Kharashka dib u dhigista waxaa laga yaabaa in lagu soo oogo kiisaska lacag celinta iyadoo maskaxda laga beddelayo. Iibsadayaasha Caalamiga ah oo keliya
* Waajibaadka soo dejinta, canshuuraha, iyo kharashyada kuma jiraan qiimaha sheyga ama qiimaha dhoofinta. Lacagtani waa mas'uuliyadda iibsadaha. * Fadlan ka hubi xafiiska kastamka wadankaaga si aad u ogaato waxa kharashyadan dheeriga ah ay noqon doonaan ka hor inta aan la iibsan ama la iibsan.
* Ka shaqeynta iyo maaraynta kharashyada ku saabsan alaab celinta waa masuuliyada iibsadaha. Lacag celin ayaa la soo saari doonaa sida ugu dhakhsaha badan ee macquul ahaan macquul ah macmiilkana waxaa la siin doonaa ogeysiin emayl ah. Lacag celinta waxay quseysaa oo kaliya qiimaha sheyga Diidmada
Haddii aad ku qanacsan tahay iibsigaaga, fadlan la wadaag khibradaada kuwa kale ee wax iibsada oo noo reeb ra'yi-celin wanaagsan. Haddii aadan ku qanacsanayn iibsashadaada sinnaba, fadlan horta nala soo hadal!
Waxaan ku faraxsanahay inaan kaa caawinno inaad xalliso dhibaato kasta oo haddii xaaladdu u baahan tahay, waxaan ku siin doonnaa lacag celin ama beddelaad.
Waxaan isku dayeynaa inaan ka caawinno macaamiisheenna inay saxaan wixii dhibaato ah ee ka jira xadka macquul ahaan.
Waxay kuxirantahay xaalada, wali waan aqbali karnaa codsiyada damaanad qaadka ah